Gabiley Iyo Guyaal Tegey Gobolnimoraadiska Gabiley Qormadii Afraad | Gabiley News Online
Gabiley Iyo Guyaal Tegey Gobolnimoraadiska Gabiley Qormadii Afraad
Kulan wacan walaalayaal, waa qormadeenii afraad oo aynnu ku soo qaadan doonno – haddii Eebbe idmo – dhacdooyinkii dhaliyey; firfircoonidii gobolnimoraadiskii Gabiley ee bilowgii 1970naadkii.
Dhacdooyinkii arrintaasi dhaliyey oo aynnu soo qaadan doonno intooda muhiimka ah oo keli ahi waxay u kala horreeyeen sidatan:
Markii uu inqilaabka ku qabsaday Siyaad Barre xukunka dalkii la odhan jirey, Jamhuuriyada Soomaaliya; bishii Oktoobar 1969kii; ayaa dhammaan hay’adaha dawladda madax looga soo dhigay niman askar ah oo ka wakiil ah golihii Sare ee Kacaanka.
Haddaba, guddoomiyihii (district commissioner) ugu horreeyey ee degmada Gabiley ninkii loo soo magacaabay wuxu ahaa, Ciise Tarambi Ugaas oo ahaa gaashaanle (majour). Ciise Tarambi, wuxu ahaa: nin wadaad ah, waayo’arag ah, daacadna ka ahaa shaqadiisa oo degmada mashaariic badan ka fuliyey muddadii uu joogey.
Ciise Tarambi wuxu ahaa, ninkii kala habeeyey ee qurxiyey magaalo madaxda degmada ee Gabiley. Wuxu ahaa ninkii kala saaray, daaraha iyo dasada (aqal soomaaliga) ee sameeyey; habkii loo yaqaanney (new G)da oo laga soo gaabiyey (new Gabiley) – dabcan isaga oo kaashanaya dawladda hoose ee degmada iyo madaxdeedii.
Ciise Tarambi oo degmada joogey dhawr sannadood, markii dambana degmada la xididay oo gabadh ka guursadey; si wanaagsan ayay dadweynaha degmada u wada jaanqaadeen – gaar ahaanna odayaasha degmada iyo ururadii bulshadaba.
2. Ninkii Ciise bedeley ee degmada yimid wuxuu ahaa, dhamme (captain) Maxamed X. Jimcaale oo ku magacdheeraa Jimcaale. Guddoomiye Jimcaale, inkasta oo uu ahaa nin aan lahayn astaamihii Ciise; haddana si weyn ayay dadweynaha degmada isku fahmeen. Markii dambana isna degmada inan buu ka guursadey oo wuu la gacaloobey!
3. Dhacdooyinka kale ee saamayntooda lahaa xilligaasi waxa ka mid ahaa: xafiis dalka oo dhan ka furnaa oo dhan oo la odhan jirey, xafiiska hanuuninta dadweynaha (public Relations office); ayaa degmada Gabiley la keenay dhawnr nin oo firfircoon oo ay ka mid ahaayeen: C/raxmaan Aw Yuusuf Ducaale (Boobe) iyo nin kacaamaysnaa oo la odhan jirey, Ibraahim Boolitsiye oo ahaa ninkii soo halhayska u lahaa ee dadka baray; Gabiley horey u martay!
4. Waxa iyana saamayn weyn oo dhan walba ah ku yeelatay degmada waqtigaasi, geeridii gabayaagii weynaa ee Cabdillaahi Suldaan Timacadde (IHUN) ee sannadkii 1973kii. Geeridaasi Timacadde oo siyaabo badan degmada u saamaysay waxay keentay in magaciisa lagu weyraxo oo la raadiyo meelo muhiim ah oo lagu magacaabo – gobolnimoraadiska doorkeeda ku lahayd.
Fadlan dib u dheeho qormooyinkii ku saabsanaa dugsiga sare Timacadde – haddii aad heli kartid.
5. Ololihii hor-u-marinta reer miyiga ee sannadihii 1974/75kii oo ay degmadu guulo waaweyn ka soo hooysey – kuna mutaysatay billad dahab ah oo dhinacyada kacaannimada iyo hor-u-marka ah iyo arrimo kalaba waxay kor u sii qaadeen hammigii gobolnimoraadiska ahaa ee xilligaasi.
Waxa kale oo aad akhriste maanka ku haysaa, in dhaqdhaqaaqa gobolnimoraadiska ee degmada Boorama socdey iyo hadba heerka uu marayo isha lagu hayey. Waxadse ogaataa akhriste, in loolankaasi labada degmo ee walaalaha ah ka dhexeeyey ahaa mid caafimaad qaba oo aan cilad iyo caabuq toona lahayn.
Waxyaabahaasi aynnu korka ku soo tilmaannay waxaynu uga dan lahayn, maragmuujin iyo soo bandhigiddi is fahamkii degmada iyo madaxdii la keenay dhexmaray iyo inay beryahaasi degmadu ku tallaabsatay hor-u-mar la taaban karo oo dhan walba leh. Taasi loo arkayey, in heer degmo laga gudbey oo gudbey; heer gobol.
Guntii iyo gegegabadii qormadeenan afraad, toojkii (torch) gobolnimoraadiska ee degmada Gabiley – wejigiisii hore wuxu si fiican u shidnaa illaa 1975kii!
Saddexdii sannadood 1976 illaa 1978kii halgankaa gobolnimodoonka ahaa, wuxu galay marxalad hogosho
ah (hibernation period).
Haddaba, la soco qormada shanaad oo aynnu ku falanqayn doonno – haddii Ilaahay idmo- sababaha uu halgankaasi u shiiqay muddadaasi.